Nicole Prause ၏သားကောင် - ပါးပျဉ်း၏ပုံသဏ္groundာန်များသည်အကြောင်းပြချက်မရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Nicole Prause ရဲ့သားကောင် - ပါးပျဉ်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့အယူအဆတွေဟာသူမကျူးလွန်သူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်။
Update - Serial အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်သူ Nicole Pause သည် Gary Wilson အားတရားစွဲမှုများရှုံးသည်။ 2020 ၏သြဂုတ်လ၌ တရားရုံး၏စီရင်ချက်များသည်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လတွင်၊ Prause သည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သူမ၏ပုံမှန်လိမ်လည်မှုများ (ငါ့ကိုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း) ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်ကိုဆန့်ကျင်ရန်အကြောင်းမဲ့ယာယီတားဆီးမိန့်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်တောင်းခံရန် Prause ၏တောင်းဆိုချက်အရသူမကသူမကို YBOP နှင့် Twitter တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။မုသားသက်သေခံမှုသည် Prause တွင်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ) ။ တရားမ ၀ င်စနစ် (TRO) ကိုတလွဲအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ငါ့ကိုနှုတ်ဆိတ်။ နှောင့်ယှက်ရန် Prause ကို SLAPP ဆန့်ကျင်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်ကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည် (အများပြည်သူပါဝင်မှုကိုဆန့်ကျင်။ မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှု) (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။။ Prause သည်သူမ၏လိမ်လည်လှသော TRO တစ်လျှောက်လိမ်ညာခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား သူမကိုထောက်ပံ့ရန် ထူးဆန်းတဲ့တောင်းဆိုမှုများ ငါသူမ၏အညှာသို့မဟုတ်နှောင့်ယှက်ကြောင်း အဂတိတရားအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည်ကျွန်ုပ်အားတိတ်ဆိတ်စွာနှိပ်စက်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိခြင်းကိုတားဆီးရန်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်သည် Prause အားကျွန်ုပ်၏ရှေ့နေကြေးပေးဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်။
2013 ဟောင်းတဦး UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause အတွက် ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဂယ်ရီ Wilson က, နှောင့်ယှက် libeling နှင့် cyberstalking စတင်ခဲ့သည်။ (Prause ဇန်နဝါရီလ, 2015 ကတည်းကတစ်ဦးပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကအသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ) တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာသူမလည်းသုတေသီများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေ, ကုသ, စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးကယခင် UCLA ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးကိုဗြိတိန်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုနာလန်ထူအတွက်ယောက်ျားတစ်ဦးအပါအဝငျအခွားသူမြားပစ်မှတ်ထားစတင်ခဲ့သည် အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry, NoFap.com, RebootNation, YourBrainRebalanced သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (ကြည့်ပါ - နီကိုးလ် Prause ၏မလိုတမာသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားမဖွယ်မရာအသုံးပြုခြင်းခံရသူများစွာ).
သူမနိုးထနေသောအချိန်များကိုသူတစ်ပါးအားအနှောင့်အယှက်ပေးနေစဉ် Prause သည်ပါးနပ်စွာပျိုးထောင်ခဲ့သည် သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား - သူမကခဲ့ကြောင်းဒဏ္thာရီ “ သားကောင်” porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်လက်ရှိသုတေသနအခြေအနေနှင့်ပတ်သတ်သောသူမ၏ပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူဝံ့သူမည်သူမဆိုအများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများအားတန်ပြန်ရန် YBOP သည် Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖိအားပေးခံခဲ့ရသည်။ အောက်ပါစာမျက်နှာများကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ (နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်များမှာကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause ၏သားကောင်များသည်နောက်ထပ်အပြစ်ပေးခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်)
Nicole Prause၊ David Ley & @ BrainOnPorn ၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်း NoFap မှ Alexander Rhodes အားအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းတို့၏သမိုင်း
နီကိုးလ် Prause နှင့်ဒေးဗစ်လေတို့သည် Don Hilton အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်မမှန်သောသက်သေကိုကျူးလွန်ကြသည်။
လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့်အခြားနေရာများတွင်လူအများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုဆိုက်ဘာနှောင့်ယှက်မှုများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ Gary Wilson (ရာနှင့်ချီသောလူမှုမီဒီယာမှတ်ချက်များသည်နောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ) ဖြစ်သောကြောင့် Prause ၏တွစ်တာနှင့်ပို့စ်များကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်သည်။ သူမသားကောင်များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်ဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်သူသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှလူအများနှင့်နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း မှတ်ချက်။ ။ ထိုစာမျက်နှာလအတွင်းအသက်ရှင်ပြီးနောက် Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုနှစ်ခုဖြင့်စတင်ဝင်ရောက်လာသည်။Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes), တစ်ဦး အတုအယောင်အမိန့် (ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည်) တစ် ဦး ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုကိစ္စနှင့် ကိစ္စတွင်ကီထိုင်တံဆိပ်.
Prause ကိုသားကောင် - ၀ တ္ထုကို“ မုသားကြီး” ဟုဖော်ထုတ်ခြင်း - သူမသည်ကျူးလွန်သူမဟုတ်၊:
၁) လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မှဂယ်ရီ Wilson အား“ ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကား” ခဲ့သည်။
အဖြစ်မှန်: ငါနှစ်ပေါင်းများစွာ Los Angeles မှာမပြဘူး။ သူသည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်စတင်ခဲ့သောဤပြောဆိုချက်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများမရှိပါ (အောက်တွင်ကြည့်ပါ) နှင့်စတင်ခဲ့သည် ဇူလိုင်လ, 2013 ခုနှစ်တွင်လူသိရှင်ကြား (အနည်းငယ် နေ့ရကျ ပြီးနောက် ငါသူမ၏ EEG လေ့လာမှုဝေဖန်ခဲ့သည်) ။ Prause မှထုတ်ပြန်သည့်တစ်ခုတည်းသောရဲအစီရင်ခံစာကို (ဧပြီလ 2018) သူမငါ့ကိုနောက်ယောင်ခံအကြောင်းကိုငါ့ကိုဘာမျှမကပြောပါတယ်; မည်သည့်ရာဇ ၀ တ်မှုမျှမကြားရပါ။ အဲဒီအစား, ဂျာမန်ကွန်ဖရင့်ကိုတက်တဲ့အတွက် LAPD ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းခဲ့တယ်သူမကတက်ရောက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်၊မျက်နှာပြင်ပုံ)။ ငါဂျာမနီကိုသွားပြီး2018ပြီ ၂၃ မှ ၂၅ ရက်အထိ (၂၀၁၈ 5ပြီ ၂၅ ရက်တွင်သူမ၏ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းကြောင်းသတိပြုပါ) အပြုအမူစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဖရင့်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကိုတင်ပြခဲ့သည်။
သူမမှာ Prause ၏ပြောဆိုချက်ဖြစ်ပြီးသူမသည်ဂျာမနီရှိ ICBA ကွန်ဖရင့်သို့တက်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ICBA ကွန်ဖရင့်၌တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်းကိုတစ်ခါမျှမတက်ရောက်ဖူးပါ။ ချီးမွမ်းခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုမယုံကြည်ပါ။ သူမ၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းတစ်ခုလုံးတွင် Prause ၌ရှိသည် စစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ် အမူအကျင့်စွဲများ၏ concept ကိုဆန့်ကျင်, အထူးသဖြင့်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲ။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုတစ် ဦး တင်သွင်းခဲ့သည် မမှန်သော ရဲအစီရင်ခံစာ။
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်မှာသူမအားမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းသည်လမ်းခရီးတစ်လျှောက်နီးကပ်လာသည်။ တကယ်တော့သူမကကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွပ်စွဲတယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲခဲ့တယ် ပြီလ 2013 အီးမေးလ်လဲလှယ်ရေး ငါဒေးဗစ်လဲ့ရဲ့အဖြေကိုထုတ်ပြီးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာဖြစ်ခဲ့တယ် စိတ်ပညာယနေ့တွင် ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်သူနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသူပစ်မှတ်ထားသည့်နေရာမှာ -“Porn on Your Brain - စွဲလမ်းစရာမကောင်းဘူး။Ley ၏ဘလော့ဂ်သည် Nicole Prause ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်သက်တူရွယ်တူချင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း EEG လေ့လာမှုအကြောင်းဖြစ်သည် (ဤသည်မှာ Prause အကြောင်းကျွန်ုပ်ကြားသိခဲ့ရသည်)
Prause သည်ကျွန်ုပ်နှင့်သာအဆက်အသွယ်ပြုပြီးအီးမေးလ် ၂ ခုနှင့်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်ကိုမှတ်ချက်ပေးသည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် တုံ့ပြန်မှု တစ်ပြိုင်နက်တည်းသူမဆက်သွယ်ခဲ့သည် စိတ်ပညာယနေ့တွင် သူမ၏ဒုတိယအီးမေးလ်ကိုပို့သူကိုအယ်ဒီတာများ။ အောက်ပါအီးမေးလ် ၂ ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့တိုတောင်းသောဖလှယ်မှု၏အဆုံးမှဖြစ်သည် (Prause & Wilson ၏အီးမေးလ်ဖလှယ်မှုတစ်ခုလုံး၏ screenshots များ):
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, Prause ငါလုပ်ခဲ့တယ်အားလုံးခဲ့ပေမယ့်, သူမသူ့ကိုနောက်ယောင်ခံသည်ဟုစွပ်စွဲနေသည် တုံ့ပြန် အီးမေးလ်နှစ်စောင်ကိုသူပို့လိုက်တယ်။ ဤတွင် Prause ၏လုပ်ကြံထားသော“ နောက်ယောင်ခံ” ပြောဆိုမှုများစတင်ခဲ့သည်။
Prause သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးစတင်ခဲ့သည် အများပြည်သူ ၃ လအကြာမှာ၊ ငါပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးတဲ့နောက်“ ဂယ်ရီဝီလ်ဆင်ဟာအပြေးသမားတစ်ယောက်ပါ ငါ့ဝေဖန်မှု သံမဏိ et al ။ , 2013သူမခဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ လွဲဖော်ပြ သံမဏိ အမှန်တကယ်တွေ့ရှိချက်များ။ Prause ကဒီ YouTube ချန်နယ်အပါအ ၀ င်၊ GaryWilson Stalker။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ YouTube စာဝင်ပုံး၏မျက်နှာပြင်တွင် Prause ၏အဆက်မပြတ်ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုဖော်ပြသည် (သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်):
မေးခွန်း - ကျွန်ုပ်သည် UCLA တဝိုက်ပျံဝဲရန်ကျွန်ုပ်၏အသေးစိတ်ဝေဖန်မှုကိုထုတ်လွှင့်သည့်နေ့၌ပင်မိုင် ၈၀၀ ကိုလော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်သို့မောင်းခဲ့သလား၊ တရားခွင်ကိုသွားပြီးအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ကြပါစို့။
၂။ ဒေါက်တာ Prause သည်ဆွေးနွေးပွဲတွင်လက်နက်ကိုင်အစောင့်များလိုအပ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Gary Wilson တက်ရောက်ရန်ခြိမ်းခြောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
အဖြစ်မှန်: ဤအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသောစိတ်ပျက်ဖွယ်ပြောဆိုမှုများအတွက် Prause သည်စာရွက်စာတမ်းများမရှိပါ။ Prause တွင်ပူးတွဲတင်ဆက်သူ Susan Stiritz က Gary Wilson သည်မိုင် ၂၀၀၀ ပျံသန်းနိုင်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။။ Prause သည်လက်နက်ကိုင်အစောင့်များ (သို့မဟုတ် ninja warriors) ကိုတောင်းခံနိုင်သော်လည်းသူမ၏အသေအချာပြင်ဆင်ထားသောသားကောင်၏ပုံပြင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သာဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတရားစွဲမှု ၃ ခုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အမှတ်စဉ်အသရေဖျက်မှုနှင့်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းသည်ဤအချက်ကိုအချည်းနှီးဖြစ်သည်။
(၃) Dr.Prause သည်“ ရဲနှင့် FBI အစီရင်ခံစာများ” ကိုဂယ်ရီ Wilson အားတင်သွင်းခဲ့သည်
အဖြစ်မှန်: အတွက်စတင်ခြင်း ဇူလိုင်လ, 2013 ပြီးနောက် (ကရက်အနည်းငယ် ငါ Prause ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး EEG လေ့လာမှုအပေါ်ဂရုတစိုက်ဝေဖန်မှုထုတ်ဝေခဲ့သည်ကျွန်ုပ်၏နာမမည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ မှတ်ချက်များသည်အကြောင်းအရာနှင့်လေသံနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ Wilson ကသူမအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာတင်ခဲ့သည်၊ Wilson ကဆင်းရဲသောအမျိုးသမီးကိုရိုက်နှက်သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ "နှင့်" Wilson က (သူအန္တရာယ်ရှိကြောင်းသဘောတူသည်) LAPD နှင့် UCLA ကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှသတင်းပို့ခဲ့သည်။ "
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် Prause သည် UCLA သို့မဟုတ်သူမ၏ဆိုက်ဘာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမှအလုပ်မလုပ်တော့သဖြင့်သူမနောက်ဆုံးတွင် Gary Wilson ကို LAPD နှင့် UCLA ကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့သို့သတင်းပို့ခဲ့သော“ လူ” အဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ငါနှစ်များတွင် LA ကမှမပြဘူး။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ နီးပါးနီးပါးရှိပြီးမည်သည့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီကမျှကျွန်ုပ်နှင့်ဆက်သွယ်ဖူးခြင်းမရှိပါ။ (နှောင့်ယှက်သူမည်သူမဆိုရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာအတုတစ်ခုကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။ ) တရားရုံးများကိုအလွဲသုံးစားလုပ်)
ငါ Prause တကယ်တော့, (နောက်ပိုင်းတွင်လျစ်လျူရှုခဲ့သော) လိမ်လည်မှု, အခြေအမြစ်မရှိအစီရင်ခံစာများတင်သွင်းခဲ့ကြောင်းယူဆပေမယ့်သူက Prause မုသာစကားကို - နောက်တဖန် - ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ရဲဌာနနှင့် UCLA ကျောင်းဝန်းရဲတပ်ဖွဲ့သို့ခေါ်ဆိုမှုသည်“ ဂယ်လီ Wilson” နှင့် ပတ်သက်၍“ သူတို့ကတင်ပြထားသည့်မည်သည့်အစီရင်ခံစာတွင်မျှဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏တွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံရန်ဤအပိုင်းကိုကျွန်ုပ်ဖန်တီးခဲ့သည်။ Los Angeles မြို့ရဲဌာနနှင့် UCLA ရဲ့ကျောင်းဝင်းရဲတပ်ဖွဲ့ Prause ဂယ်ရီ Wilson ကအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအစီရင်ခံစာများဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု.
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် 2019 ၏မတ်လ၌တည်၏ Prause ရှိခဲ့ပါတယ် နောက်ဆုံး လိမ်လည်ရဲတပ်ဖွဲ့အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့သည် ဧပြီလ 25, 2018 အပေါ်။ ရဲမှရဲ့ရဲ့ရဲ့ရဲ့ရဲ့အစီရင်ခံချက်ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်ကျောင်းသားစာနယ်ဇင်းသမားများ (နှင့်မှားယွင်းစွာရေးသားထားသော Prause ကိုးကွယ်သူများ) ထိုအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့ရသည်။ လူသိရှင်ကြားတက္ကသိုလ်သတင်းစာတွင်အွန်လိုင်းကပြန်ထုတ်ပေး။ ၎င်းကို Wisconsin တက္ကသိုလ်မှအာဏာပိုင်များကဖယ်ရှားလိုက်သည်။
Prause ၏ LAPD အစီရင်ခံစာကို“ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်း” ဟုအမျိုးအစားခွဲခြားထားသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်း (ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး) ။ သူမသည်တကယ့်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်စုံတစ်ရာကိုအစီရင်ခံခြင်းမပြုပါ။ အဲဒီအစား, Prause သည်ကျွန်ုပ်အား LAPD သို့အစီရင်ခံခဲ့သည် -
ဂျာမန်ညီလာခံတက်ခြင်း မဟုတ်မမှန် သူမကပြောဆိုသည် တက်ရောက်ချင်တယ် (ဒါပေမယ့်သူမငါ့ကိုကြောက်တယ်ဟုဆိုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝံ့) သတိပြုရန်မှာ Prause သည်ကျွန်ုပ်တက်ရောက်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းမသိနိုင်ကြောင်းနှင့်သူမရဲစခန်းသို့ထိုနေ့ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် ပြီးနောက် အဆိုပါညီလာခံကျော်ခဲ့သည်။
သူမ၏အပြုအမူများကိုဖော်ပြသည့်ကျွန်ုပ်၏စာမျက်နှာ (၂) ခုတွင်သူမ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုဖန်သားပြင်တင်ခြင်း (စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3နှင့် စာမျက်နှာ 4), နှင့်သူမ၏တုန့်ပြန်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ငြင်းဆန် မအောင်မြင်သောလိမ်လည် DMCA နှုတ်ယူရန်ကြိုးပမ်းမှု ၃ ခု.
ငါဖြစ်လျှင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သူမကိုနောက်လှည့်ပြီးဘာဖြစ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကငါ့ကိုသတင်းပို့တာလဲလို့ငါ့ကိုဘာကြောင့်မဖော်ပြတာလဲ။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရဲအစီရင်ခံစာကိုကျွန်ုပ်အားတကယ့်ရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့ခြင်းကြောင့်သိသောကြောင့်အဖမ်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်သည်။
Wilson ကဂျာမနီမှခရီးထွက်ခြင်းနှင့်တက်ရောက်ခဲ့သည်မှန်ဒါဟာင် အပြုအမူစွဲအပေါ် 5th အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညီလာခံAprilပြီလ ၂၃ မှ ၂၅ ရက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့သော (Prause သည်သူမ၏ရဲစခန်းကိုreportပြီ ၂၅ ရက်တွင်တင်ခဲ့သည်) မှားယွင်းသောအယူအဆမှာဂျာမနီရှိ ICBA ညီလာခံကိုတက်ရောက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုသည် ICBA ညီလာခံတွင်တစ်ခါမျှတက်ရောက်ခြင်း (သို့) တင်ပြခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ချီးမွမ်းခြင်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုမယုံကြည်ပါ။
သူမသည် ICD-11 CSBD အလုပ်-အုပ်စုအများအပြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲမော်ဒယ်ထောက်ပံ့အရည်အသွေးမြင့်လေ့လာမှုများထုတ်ဝေရန်အဘယ်သူသည်မျိုးစုံနဲ့အခြားသုတေသီများသို့ပြေးမယ်လို့အဖြစ် Prause အဆိုပါ ICBA တက်ရောက်ရန်မယ်လို့ငရဲ၌အဘယ်သူမျှမလမ်းရှိပါသည်။ တကယ်တော့အများအပြားကြီးတွေ name ကိုသုတေသီများတရားဝင် Prause ရဲ့ချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှုများဝေဖန်ခဲ့ကြပြီး (ဆိုလိုသည်မှာ Valerie Voon, မာ့ခ် Potenza, Matuesz Gola, ဿိအမှတ်တံဆိပ်, ခရစ်ယာန် Laier) တင်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားသူ။ ရိုးရှင်းစွာ ထား. , Prause (သူမ deplores လူများအများအပြားနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအပေါ်နှင့်နောက်ကွယ်မှတိုက်ခိုက်မှုများအားဖြင့်နှစ်ခု Prause EEG လေ့လာမှုများဤသုတေသီရဲ့ဝေဖန်မှုမှလင့်များဝိုင်းရံခဲ့ကြလိမ့်မယ်: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ။ ဤအသုတေသီအများအပြားက Prause ရဲ့ဖြစ်ပွားနေသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြုအမူများနှင့်မြင်ကွင်းများပရိယာနောက်ကွယ်မှကောငျးစှာသတိထားမိကြသည်။
Gra Wilson သည် ICBA ညီလာခံသို့တက်ရောက်နေသည်ဟု Prause ကကြိုတင်သိရန်လမ်းမရှိချေ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, Prause ICBA ညီလာခံ၏နောက်ဆုံးနေ့Aprilပြီလ 25 ရက်နေ့တွင်သူမ၏ရဲအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Prause သည် Wilson ၏တက်ရောက်သူအကြောင်းအခြားညီလာခံတက်ရောက်သူ (Prause ၏ UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်း / အခန်းဖော်လည်းတက်ရောက်ခဲ့သည်) ကပြောခဲ့သည်ဟုဆိုလိုသည်။
နောက်ဆုံးသတင်း - သြဂုတ်လ 2020: ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်၊ Prause တွင်သူမအားနောက်အဆင့်သို့တက်သွားသည် ယာယီထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းရှာ၏ သေနတ်များကိုင်ဆောင်ထားသောလူများနှင့်ဤလိမ်လည်လှည့်ဖြားသောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဓာတ်ပုံများပေါ်တွင်အခြေခံသည့် LA တွင်ကျွန်ုပ်ကိုပြစ်တင်ပါ။ တရားသူကြီးက TRO ကိုငြင်းဆိုပေမယ့် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာအမြဲတမ်းတားမြစ်မိန့်ကိုကြားနာခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် COVID ထိမှန်ခဲ့တယ်။ ဇွန်လမှာတော့ငါ Prause ဆန့်ကျင် anti-SLAPP ဝတ်စုံကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်တစ်ခု SLAPP ကိုဆန့်ကျင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုဖိနှိပ်ရန်တစ်စုံတစ် ဦး က (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ကိစ္စတွင် TRO) သည်တရားမဝင်သောတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုကိုတင်သွင်းသောအခါအသုံးပြုသည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိပြည်နယ်ကောင်တီ Superior တရားရုံးမှ Wilson အားဆန့်ကျင်သောအမိန့်ကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်တရား ၀ င်သော၊ အများပြည်သူပါ ၀ င်မှုကိုဆန့်ကျင်။ တရားစွဲဆိုခြင်း (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ဟုခေါ်သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည် Wilson အားတိတ်ဆိတ်စွာအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိရန်အမိန့်ပေးသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအလွဲသုံးစားပြုသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်က Prause အား Wilson ၏ရှေ့နေစရိတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
Prause ၏ TRO နတ်သမီးပုံပြင်တွင် ICBA သို့တက်ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်ဂျာမနီသို့သွားခဲ့သည်။ Prause သည်သူမ၏ TRO ကြေငြာချက်တွင်သူမသည် ICBA အတွက်စီစဉ်ထားသောတင်ဆက်သူဖြစ်သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်၊ ငါသူမကိုဂျာမနီသို့သွားပြီး“ သူမကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်” ဖြစ်သည်။ ဒါကလိမ်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါကြောင့် ICBA ကိုစီစဉ်သူတွေကို Prause ကိုတင်ပြဖို့တစ်ခါမှမတောင်းဆိုခဲ့ဘူး၊ သူတို့၏စာက Prause သည်မိမိကိုယ်ကိုလိမ်လည်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ Prause သည်နှစ် ဦး စလုံးအားအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည် အဲလက်စ်ရော့ဒ် နှင့် ဂယ်ရီ Wilson က မသတ်မှတ်ထားသောအမှားများအတွက် FBI သို့ Rhodes ရောငါပါ Fraia တောင်းဆိုချက်များကို FBI သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။ သူမမဟုတ်ခဲ့ပါ။ အသေးစိတ်အတွက်ဤအပိုင်း (၂) ကိုကြည့်ပါ။ FBI က Prause သည်ဂယ်ရီ Wilson အား FBI အစီရင်ခံစာတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်, (2) FBI ကနီကိုးလ် Prause အလက်ဇန္ဒား Rhodes အပေါ်တစ်ဦးအစီရင်ခံစာဖြည့်စွက်အကြောင်းကိုလိမ်လည်သည်ဟုအတည်ပြု။ FBI အစီရင်ခံစာတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်လည်ပြောဆိုမှုအတွက် Prause နှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတင်ရန်ကျွန်ုပ်အား FBI ကတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ 2018: ဂယ်ရီ Wilson ကနီကိုးလ် Prause တခုတခုအပေါ်မှာ FBI ကအစီရင်ခံစာဖိုင်များကို။ Prause သည် FBI အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သည် ပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ သို့သော်သူမ၏စာမျက်နှာ ၈၆ မျက်နှာတွင်အမှန်တကယ် FBI အစီရင်ခံစာ (“ FBI” ဟုအမည်တပ်ထားသောစီဒီတစ်ခု၏ဖန်သားပြင်တစ်ခု) မပါဝင်ပါ။
2019 ခုနှစ်တွင် Diana Davison သည် Prause ၏သားကောင်အဖြစ်အပျက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်ပထမဆုံးသတင်းထောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ရက်သတ္တပတ်၏ဆက်သွယ်ရေးစဉ်အတွင်း Prause သည် Prause ၏ဂျာမန်ကွန်ဖရင့်သို့တက်ရောက်ခြင်း၏ Prause ၏မိုက်မဲသော LAPD မှလွဲ၍ မည်သည့်သက်သေအထောက်အထားမျှမပြနိုင်ခဲ့ပါ။ Davison ၏ဖော်ထုတ်မှု 'သည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။ အနှစ်တစ်ထောင် Post ကို 'နီကိုးလ် Prause အပေါ်ဖော်ထုတ်။ Diana Davison သည် Prause ၏သားကောင်အတုနှင့် Prause အားတရားစွဲဆိုသည့်အသရေဖျက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ၆ မိနစ်ကြာဗီဒီယိုကိုလည်းပြသခဲ့သည်။
Diana Davison ဗွီဒီယိုသည် Prause ၏ဖြစ်ရပ်များကိုကြာရှည်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဖြစ်အပျက်များကိုအချိတ်အဆက်တစ်ခုပေးခဲ့သည်7နှစ်ကမ်ပိန်း အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များ၊ VSS ပညာရေးစစ်ပွဲအချိန်ဇယား (ချီးမွမ်းခြင်း) အချိန်ဇယားကိုဖယ်ရှားတယ်.)
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော t သည်ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ပြပေးနေပါသည်သူ Diana Davison ဗီဒီယို (စွဲလမ်းမှုဝေဖန်သူနှင့် Prause ပန်ကာအားတုံ့ပြန်မှု)
ထိုအပတ်တွင်ပင်နောက်ထပ်သတင်းထောက်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Megan Fox မှဖြစ်သည် PJ မီဒီယာ, နီကိုးလ် Prause အကြောင်းအလားတူဆောင်းပါးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်: "NoFap 'Porn စွဲမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့မှအဲလက်စ်ရော့ဒ်သည်ညစ်ညမ်းသောလိင်စိတ်ပညာရှင်ကိုစွဲချက်တင်လိုက်သည်။ "
Prause သည်ရောဂါဗေဒမုသာကောင်ဖြစ်ကြောင်းထပ်မံသက်သေပြခြင်း၊ Alex Rhodes & NoFap အကြောင်း Nicole Prause ၏လိမ်လည်မှုကိုထုတ်ဝေရန်အတွက်တောင်းပန်ရန်နှင့်သိသိသာသာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပေးရန် ScramNews မှထုတ်လွှင့်သော media outlet။ ချီးမွမ်း Scram မုသာတစ် pack ကိုကျွေးမွေး၏၎င်းတို့သည် Alex Rhodes နှင့် DonorBox (Rhodes's crowdfunding ကိုလက်ခံထားသောပလက်ဖောင်း) ကိုပစ်မှတ်ထားသည့် hit-piece တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုံနှိပ်ထားသော Scram အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏လက်ထဲတွင်သူမ - သက်သေမပြနိုင်လောက်အောင်အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများ နှင့်သူ၏ "နောက်လိုက်" ။ Rhodes တရားစွဲဆိုမှု Scram ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကသွားစေ၏! ထို့နောက် Prause သည် DonorBox ၏စီအီးအိုကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် (ချားလ်စ် Zhang ကသူမ၏မုသားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်၊ နောက်ကွယ်မှနှောင့်ယှက်မှုများနှင့်မုန်းတီးမှုသတင်းပေးပို့ခြင်းအတွက်တရားစွဲဆိုမှုသေးငယ်စွာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Zhang သည်နောက်ယောင်ခံသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
ငါနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကိုစုစုပေါင်းနှစ်တိုတိုတင်ဆက်မှုတွစ်တာ (သူမကုမ္ပဏီသို့အီးမေးလ် ၁၀ စောင်ရေးပို့ခဲ့သည်) ကိုထည့်ပြီးတဲ့အခါသူကဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာတောင်းပြီးသူမလုပ်သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ (သူမကြိုတင်ငါ့ကိုပိတ်ဆို့ခဲ့ပါဘူး) ဒါကပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူမသည်ဝေးဝေးနေလိုသည့်အခါနောက်ယောင်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲသည်။ pic.twitter.com/rcdXbpXlta
- Comrad ကားလို့စ် (@rebelczz) မေလ 25, 2020
၄။ ဂယ်ရီ Wilson သည်“ အဆက်အသွယ်မရှိသောအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့သည်”
အဖြစ်မှန်: ထိုကဲ့သို့သောအမိန့်မရှိပါ။ တရားရုံးသည်ကျွန်ုပ်အားတရား ၀ င်ခွင့်ပြုမိန့်ပေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။ သူသည်တားမြစ်မိန့်သို့မဟုတ်အမိန့်ကိုရရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်လူမဆန်စွာလှည့်စားနေသည်။ သူမမှာမရှိဘူး သို့သော်၎င်းကသူမကိုလူသိရှင်ကြားနှင့်မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းကိုသူမနှင့်အဆက်အသွယ်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့်“ နှောင့်ယှက်ခြင်း” ဟုစွပ်စွဲခြင်းများကိုရပ်တန့်သွားစေသည်။ သူမ၏ဖော်ပြချက်များ၏ရှင်းလင်းသော၊ တရားမဝင်လုပ်ဆောင်နေသည်။ သူမ၏ရန်လိုသောနည်းဗျူဟာများနှင့်သိသိသာသာမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များသည်သူမ၏အွန်လိုင်းဆိုက်ဘာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းခံရသူများကိုအနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်ခြင်းများကိုတွက်ချက်သည်။ သူမအပေါ်အသရေဖျက်မှု ၂ ခုကိုတရားစွဲဆိုထားသည်။ လုံလောက်ပါတယ်
အတွက်မှတ်တမ်းတင်အဖြစ် ချီးမွမ်းစာမျက်နှာ၏ပထမ ဦး ဆုံးအပိုင်း, Prause အစဉ်အမြဲငါဖြစ်ပျက်သောငါနှင့်အတူသာအီးမေးလ်အဆက်အသွယ်စတင်ခဲ့သည်။ ဤတစ် ဦး တည်းသောအီးမေးလ်ဖလှယ်ခြင်းကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည် (ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်ဖလှယ်မှုတစ်ခုလုံး၏ screenshots များ) ။ သူမသည်အတုယူထိုက်သော“ အဆက်အသွယ်မရှိသောအမိန့်” ရရှိသည်ဟုဆိုကာ Prause သည်ကျွန်ုပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ Twitter, Facebook နှင့် Quora တို့တွင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3နှင့် စာမျက်နှာ 4။ ) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Prause ရှိပါတယ် 100 ကျော် aliases ကိုအလုပ် နှစ်တွေတစ်လျှောက်ကျွန်မနဲ့တခြားသူတွေကိုရှုတ်ချဖို့ (သူမနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Nicole Prause ၏ PDF ဖိုင်သည်) ။ သူမလည်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် alias အီးမေးလ်အကောင့် ငါအကြောင်းကိုမုသာစကားကိုဖြန့်ဖို့
ငါကသူမထံမှမရေမတွက်နိုင်သော "အဆက်အသွယ်" လျစ်လျူရှု, Prause ရဲ့အသရေဖျက်မှုအွန်လိုင်းတိုက်ခိုက်မှု၏လက်တဆုပ်စာကိုသာတုန့်ပြန် ဥပမာအားဖြင့် ၂၄ နာရီကြာသည့်အချိန်တွင် Prause သည်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ Quora မှတ်ချက် ၁၀ ချက်တင်ခဲ့သည် သူမ၏အမြဲတမ်းရပ်ဆိုင်းမှု။ အခြားဥပမာတစ်ခုတွင် Prause (RealYBOP Twitter ကိုအသုံးပြုခြင်း) တင်ခဲ့သည် တွစ်တာ ၁၂၀ ကျော် ၄ ရက်အတွင်း (tweets ၏ PDF) ။ Prause ကိုဥပမာအနေဖြင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့သည်။
မတ်လနှင့်Aprilပြီလ၊ ၂၀၁၃ - နီကိုးလ်ပါဝါ၏အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုများစတင်ခြင်း (သူမနှင့် David Ley သည် PT blog post တွင် Wilson ကိုပစ်မှတ်ထားပြီးသောနောက်)
ဇူလိုင်လ, 2016: Prause မဟုတ်မမှန်နှောင့်ယှက်၏ PornHelp.org, သရေဖျက်မှု @ စွပ်စွဲနှင့်အမုန်းမြှင့်တင်
အောက်တိုဘာလ, 2016: Prause မုသားသက်သေခံမှု Nofap ရဲ့အလက်ဇန်းဒါး Rhodes နှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကတိပြု
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - အဆက်အသွယ်အတုမရှိသောတောင်းဆိုမှုများ၊ အတုအယောင်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတောင်းဆိုမှုများနှင့်လူများကိုနှုတ်ဆိတ်နေခြင်းကိုချီးမွမ်းပါ (Linda Hatch၊ Rob Weiss, Gabe Deem, Gary Wilson, Marnia Robinson, Alex Rhodes, etc)
ဒေါက်တာ Prause ကိုရှုတ်ချရန်ဂယ်ရီ Wilson သည်မှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းကိုအသုံးချခဲ့သည်
အဖြစ်မှန်: လုံးဝမှားယွင်းသော။ Prause နှင့် Ley တို့သည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်သောဥပမာကိုသာပေးသည်။ ငါမတော်တဆတုံ့ပြန်မှုအတွက် "အလှမယ်" Prause ရိုက်ထည့်ခဲ့သည် ကျွန်ုပ်၏လိင်တံအရွယ်အစားကိုမေးမြန်းသည့် Dr.Prause ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏မှားယွင်းစွာမှားယွင်းစွာပြောဆိုခြင်းကိုသက်သေပြသည့်အတိုင်းအတာဖြစ်သည်။ နောက်တာပါ
ရှင်းပြအဖြစ် ဤအပိုင်းကို, ငါ့အမှားဒီဇင်ဘာလ 18, 2013 တွင်ဖြစ်ပွားသောအခါ, ဂုဏ်ယူငါ့နာမကိုအမှီပေါ်လာသောဖိုရမ်များအပေါ်ကနေဒါအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ shenanigans နှင့်ပတ်သက်။ သူမ၏မှားယွင်းသောတင်ခဲ့သည်, ဆိုက်ဘာစော်ကားမှုသောင်းကျန်းမှုအပေါ်ခဲ့ နာမည်အတုများကို သုံး၍၊ မကြာခဏ porn ပြန်လည်နာလန်ထူဖိုရမ်များ trolls ညစ်ညမ်းသောသိပ္ပံပညာကိုရည်ညွှန်း။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကိုကုသရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပျောက်ကင်းစေရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အသင်း ၀ င်များကိုနှောင့်ယှက်သည် သူမ၏ CBC ၌တည်၏ (RealScience ကဲ့သို့) YourBrainRebalanced Prause အပေါ်မှတ်ချက် Wilson ကမေးတယ်: "သင့်ရဲ့လိင်တံဂယ်ရီဘယ်လိုအသေးစားဘာလဲ"
အထက်ပါ၏မျက်နှာပြင်ပုံ, ငါအမှတ်တမဲ့ရေးသားခဲ့သည်ဘယ်မှာငါ့အဖြေကိုတလျှောက် "အလှမယ် Prauseငါ၏အလိင်တံနှင့်ပတ်သက်။ သူမ၏လူငယ်မေးခွန်းကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်, Prause ငါ့ကို misogynist အဖြစ်မဟုတ်မမှန်ခြယ်ရန်အသုံးပြုသည် "အထောက်အထား" ပါဝင်သည်။ ဤတွင် Prause ကသူမဖတ်ရန်ခက်ခဲသည့်သူမ၏“ RealScience” မှတ်ချက်ကိုတွစ်တာတွင်:
link ကိုမှ ငါ့အပြည့်အဝ။ ကျွန်ုပ်၏“ Miss” Prause ကိုသုံးသောကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်၏အပိုင်း -
ကျွန်ုပ်၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသူတောင်းဆိုသည့်အခါချီးမွမ်းခြင်းသည်လိင်အရအခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသူမအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အမှတ်တမဲ့“ Miss” စာလုံးကိုကျွန်ုပ်၏ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏မေးခွန်းများကိုကျွန်ုပ်၏ပြန်ကြားချက်တွင်သူမနှင့်အခြားသူများအားမှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များအဖြစ်သရုပ်ဖော်ရန်မရေမတွက်နိုင်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ In ဤအပိုင်းကို Prause သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်မှုအပေါ်သူမ၏ထူးထူးဆန်းဆန်းစိတ်ဝင်စားမှုကိုလက်နက်ကိုင်ခဲ့ပုံကိုနမူနာအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကကျော်, ဒေါက်တာ Prause တစ်ဦးအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူနေရာချဖို့အကြီးအဝဒေနာယူကြပြီမှပေါ်လာသော "ဟုသူမကအာဏာအမှန်တရားကိုပြောပြသည့်အခါ misogynistic ဖိနှိပ်မှုအကြောင်းမဲ့ခံအမျိုးသမီးတစ်ဦး။ " မကြာခဏသူမသည် အောက်ပါ infographic tweets သူမပုံကိုလည်းသူမက "အမျိုးသမီးတစ်ဦးသိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ်" သားကောင်နှင့်လိုမုန်းထားစိတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြားမှ porn ရဲ့အန္တရာယ်ကင်းသက်သေပြဖို့ရှေ့ဆက်အတုလုပ်တဲ့တစ် trailblazer အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူပန်းချီလျက်ရှိသည်အကြံပြုခြင်း, သူမ၏အများပြည်သူပို့ချချက်မှာမျှဝေသော။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီး Don Hilton MD နှင့် nofap တည်ထောင်သူ Alexander Rhodes ၏မှားယွင်းသောယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်လုံးဝမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ငါ (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ဇနီး)၊ ဟီလ်တန်နှင့်ရိုဒစ်စ်များသည် misogyny ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုခံယူသောမည်သည့်အကြံပြုချက်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ကန့်ကွက်မှုများသည် Dr. သူမ၏သုတေသနနှင့်ပတ်သက်။ ထောက်ခံပြောဆိုမှုများ။
Infographic အတွက်မူအထက်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း Prause ၏ misogyny ၏သက်သေသာဓကမှာကျွန်ုပ်၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်ပတ်သက်သည့်သူမ၏ကလေးဆန်သောမေးခွန်းအား“ Miss Prause” ကိုကျွန်ုပ်မတော်တဆရေးသားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးက misogynist တစ်ယောက်ပါလို့သူမပြောတာကရယ်စရာကောင်းတယ်။ သူမသည် Don Hilton MD ကသူမအား“ molester” ဟုခေါ်ဆိုသည်မှာအခြားလိမ်လည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအပိုင်းကိုအပြည့်အဝကရှင်းပြသည်အဖြစ်.
သူကအလက်ဇန္ဒားရိုဒက်စ်ကို misogynist လို့ခေါ်တယ်၊ ငါသူ့ကို 'ကိုယ်ကာယနောက်ယောင်မလိုက်' ခဲ့ဘူး သို့သော်သူမသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာကြသောလူငယ်များအားကျူးလွန်သူ၊ စာရွက်စာတမ်းများကိုကြည့်ပါ။ ဂါယူဆပါသည် #1, ဂါယူဆပါသည် #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #1, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #2, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #3, နောဧသည်ဘုရားကျောင်း, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #5, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #6, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #7, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #8, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #9, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #10, အဲလက်စ် Rhodes # 11, Gabe Deem & Alex Rhodes အတူတူ # 12, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #13, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #14, ဂါယူဆပါသည် #4, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes #15.
ရိုးရိုးလေးပြောရလျှင် Prause ၏မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များသို့မဟုတ်သုတေသန၏လွဲမှားစွာဖော်ပြမှုကိုဖော်ထုတ်သူမည်သူမဆိုသည်သူမ၏အသရေဖျက်မှုဖော်ပြချက်ကိုယုံလွယ်သောလူများကယုံကြည်လိမ့်မည်ဟူသောမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်အလိုအလျောက်“ misogynist” ဟုသတ်မှတ်သည်။ သူမသည် Twitter နှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အမှန်တကယ်ငြင်းခုံမှုများကိုရပ်တန့်ရန်၊ သူမမှားယွင်းပြောဆိုမှုများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်တားဆီးခဲ့သည်။
ထူးဆန်းသည်မှာသူမ၏သတင်းအချက်အလက်ဂရပ်ဖစ်တွင် TEDx ဟောပြောချက်အောက်မှအမည်မဖော်သော YouTube မှတ်ချက်များမှ misogyny မှားယွင်းမှုများပါ ၀ င်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် TED မှမှတ်ချက်များကိုပိတ်လိုက်သည် ဂယ်ရီ Wilson ကရဲ့ TEDx ဟောပြောပွဲ နီကိုးလ် Prause ရဲ့အများအပြားမုန်းတီးမှုနှင့်အသေရေဖျက်မှတ်ချက် (တုန့်ပြန်ဤအပိုင်းကိုကြည့်ရှု).
ငါအသရေဖျက်မှုတရားစွဲမှုနှစ်ခုကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်Donald ဟီလ်တန်, MD & Nofap တည်ထောင်သူ အလက်ဇန်းဒါး Rhodes) ဂျူရီရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားများတင်ပြရန်ရပ်တည်မှုအပေါ်ဖြစ်ခြင်းသွား။ ငါကိုယ်တိုင်အတုအယောင်သက်သေအထောက်အထားများမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်သက်သေအထောက်အထားများသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများကိုအတင်းအကျပ်ပေးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံရခြင်းနှင့် Prause နှင့် Ley တို့အားအထူးသဖြင့်မျှော်လင့်သည်။ ငါသည်သူတို့၏အပြန်အလှန်စာမေးပွဲနှင့်ညှဉ်းဆဲနှစ် ဦး သားကောင်များမဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ထိတွေ့ခံရမျှော်လင့်နေပါတယ်။